Gulukooma / Bakooro (Glaucoma)
Cudurrada Indhaha (Moderator: SomaliDoc) »
Author Topic: Gulukooma / Bakooro (Glaucoma) (Read 23126 times)
« on: August 06, 2008, 09:25:22 PM »
Gulukooma waa cudur indhaha ku dhaca oo keeni kara indho-la’aan ama lumis arag. Marka aad qabtid gulukooma, dheecaan ayaa iska buuxiya isha, taasoo cadaadis saarta xagga dambe ee isha. Cadaadiskaasi waxa uu dhaawac u geystaa dareemaha iftiinka (optic nerve) waxana uu sababaa lumis arag. Badanaa marka hore waxa waxyeelo soo gaaraa aragga dhinacyada, taasoo ay ku xigto aragga xagga hore.
Laba nooc ee ugu weyn gulukooma waa:
Gulukooma xagal-furan (open-angle glaucoma) badanaa ma laha calaamado ilaa ay ka gaarayso heer fog. Si tartiib ah ayuu cadaadisku waxyeelo u gaarsiiyaa dareemaha iftiinka mudo dheer ka dib. Taasi waxay saameysaa labada indhoodba laakiin waxa laga yaabaa inaad marka hore calaamado ku aragtid hal il.
Gulukooma xagal-xiran (angle-closure glaucoma) waxay leedahay cadaadiska oo dhakhso sare u kaca iyo calaamado dhakhso u yimaada. Lumis arag oo joogto ah ayaa ku dhici karta maalin gudaheed sidaa daraadeed waxa si weyn muhiim u ah inaad heshid daryeel caafimaad isla markiiba.
Xaaladaha Halista ah
Waxa aad halis u tahay inaad yeelatid gulukooma haddii aad:
Leedahay qof ka tirsan qoyskaaga oo qaba gulukooma
Qabtid sonkor/sonkorow ama kaadi-macaan, dhiig-kar ama cadaadis dhiig oo sareeya, cudur wadnaha ah ama shaqo-yarida qanjirka qoorta (hypothyroidism)
Haddii dhaawac isha kaaga dhacay, laguu sameeyay qalitaanada indhaha qaarkood ama aad qabtid barar indho oo mudo dheer jiray
Qaadanaysay istariyoodh (steroids) mudo dheer
Ka weyn tahay da’da 60
Glucoomada waxa laga yaabaa inaanay yeelan wax calaamado ah ilaa ay ka imanayso lumis arag. Calaamadaha kale ee aad isku arki kartid waxa ka mid ah:
Arag isku darsan
Giraamo iftiin ah oo ku wareegsan wax iftiimaya - Sida qaanso roobeedka u eg (Halos)
Lumis aragga dhinacyada (peripheral vision)
Arag si weyn u dhuuban (Tunnel vision)
Xanuun indho oo daran
Lallabo iyo matag
Waxa laga yaabaa in dhakhtarkaaga indhuhu sameeyo baaritaano si loo hubiyo:
Gulukooma lama bogsiin karo isla markaana dhaawaca ay keento lama tirtiri karo. Laakiin marka la helo daweyn, cadaadiska isha ayaa la yareyn karaa waxana la badbaadin karaa araga haray si aanu u lumin. Dhibco isha lagu dhibciyo ayaa ah daweynta ugu horeysa ee ugu caamsan ee lagu daweeyo gulukooma. Daweynada kale waxa ka mid noqon kara dawooyin afka laga qaato, daweyn la adeegsanayo laysar (laser) ama qalitaan. Marka aad qabtid gulukooma, waa in la daweeyo inta ka haray noloshaada oo dhan.
Ma jiro wax la xaqiijiyay oo lagu baajin karo gulukooma. Haddii la dareemo cadaadis isha ku soo kordhay oo goor hore la daweeyo, waxay taasi yareyn kartaa lumista aragga waxana ay baajin kartaa indho-la’aan.
Indhahaaga ha laguu eego oo ha laga baaro gulukooma ugu yaraan shantii sannadood mar ka dib da’da 40 jir.
Haddii tirada cadaadiska ishu ay sare u soo kacdo, waxa aad u baahan doontaa in laguu sameeyo baaritaano indho oo intaa ka badan.
Si loo baajiyo cadaadiska indhahaaga oo soo kordha:
Hal siyaabo aad ku maareynaysid giigsanaanta ama walwalka (stress).
Si joogto ah u samee jimicsi.
Yaree cabidda kaffeyga.
Cun cunto caafimaad leh oo ah khudaar iyo cagaar.
Xiro badbaado indho marka aad shaqeynaysid ama ciyaaraysid si loo baajiyo dhaawac.
Xadee ama yaree sonkortaata/sonkorowga, dhiig-karka, kolesteroolka iyo khatarrada cudur wadne.
Ha isticmaalin dawooyinka dhirta/geedaha ah ee loo xayaysiiyo daweynta gulukooma. Lama xaqiijin waxtarkooda waxana laga yaabaa inay daahiyaan daweyn haboon oo aad heshid.
Haddii aad qabtid wax su’aalo ama walaac ah, ku soo dir halkaan: http://somalidoc.com/smf/index.php/board,31.0.html
« Reply #1 on: March 29, 2009, 10:38:38 PM »
asalamun alaikum walaal idinkoo mahadsan waxan rabay unsha laah inaad faahfaahin yar iiga bixisaan xaanuunka aad ku magacoowday 'glaucoma' markii aad cudurada indhaha ka waramaysay.
Re: Gulukooma (Glaucoma)
« Reply #2 on: March 30, 2009, 07:57:25 PM »
Walaal faahfaahin dhinacee ah ayaa u baahantahay?
Ama qaab su'aalo ah u soo gudbiso
« Reply #3 on: August 31, 2011, 08:51:01 PM »
Asc dr, salaan ka dib walaal ma jirtaaa daawa dabar gooysa cucurkaln galuukoomad ah nuuceey rabta ahaatee, sida qalliin, eye drops, pills, tablet, mise mar haduu kuku dhaca waligaa waad qabeeysaa, oo daawa ma aleh, qufbaa iigu yiri eyedops-ka laguu soo qora haddeey ku hesha bahashana waligaa waad wadeeysaa, maxaa ka jira?
« Reply #4 on: September 06, 2011, 10:24:46 AM »
Illaa iyo hadda ma jirto qaabka kama dambey ah oo la isku waafaqsanyahay in lagu cirib tiro karo cudurkaan.
daawooyinka laguu soo qorayne waa joogteyneysaa, takhtarkaagane si joogto ah ayaa ula xiriireysaa.
Re: Gulukooma / Bakooro (Glaucoma)
« Reply #5 on: December 29, 2017, 04:40:55 PM »
Doc, Glaucoma xiriir ma la leedahay biyaha indhaha ku furmaya?
Su'aal: Hooyaday ayaa waxay leedahay xanuunka glaucoma?
Started by Ahmed SharifBoard Qaybta Su'aalaha
Views: 1019 July 16, 2016, 02:01:00 PM
Glaucoma afkeena maxaa lagu yiraahdaa ?
Started by Hashi1Board Qaybta Su'aalaha
Views: 3345 April 26, 2013, 02:52:26 PM
Su'aal: Glaucoma treatment?
Started by Dr baddalBoard Qaybta Su'aalaha
Views: 2812 August 31, 2011, 06:58:27 PM
by Dr baddal
Su'aal: Gulukooma iyo Trakooma maxay ku kala duwanyihiin?
Started by CasooweBoard Qaybta Su'aalaha
Views: 4165 May 16, 2010, 09:35:55 PM